Kutheni umntwana wam ofikisayo eluma iinzipho zakhe? | Oomama Namhlanje
Kutheni umntwana wam ofikisayo eluma iinzipho zakhe?
UAlicia tomero | 04/06/2021 10:00 | ekufundeni, Iingcebiso, Unonophelo, Intsapho, ZeMpilo
Kukho abantwana abathi ukususela ebusaneni babo ukuya kwiminyaka yabo yokufikisa baphinde basenze isenzo eso 'uluma iinzipho zakhe'. Kubizwa onychophagia kwaye ibonakaliswa ngumkhwa wokunyanzelwa wokuluma iinzipho nalapho abazali abaninzi bengazityesheli.
Zininzi izizathu zokuba kutheni umntwana wakho esenza lo mkhuba, kwiimeko ezininzi ngenxa yoxinzelelo okanye imeko yoxinzelelo, Oko kukuthi, usenokuba uhamba umzuzu wovalo okanye unxunguphalo. Ukuba ufuna ukufumana izizathu kunye nendlela yokusombulula ingxaki, qhubeka ufunda.
1 Kutheni umntwana wam ofikisayo eluma iinzipho zakhe?
2 Unalo unyango?
3 Umngcipheko wokulunywa kwezikhonkwane
I-Onychophagia inokukhula phakathi kweminyaka emithathu ukuya kwemithandathu ubudala, oko kuqala njengomkhwa odlulayo kwaye onokwenzeka ngamaxesha athile, kodwa kwiimeko ezininzi le meko inokuqhubeka kude kube kwinqanaba lokufikisa.
Usenokuba awuzange ulume iinzipho zakho ebuntwaneni bakhos kwaye kwiminyaka yokufikisa iyaqala. Esi senzo sinxulunyaniswa neminye imikhwa enjengokubamba usiba, ukuchukumisa iinwele zabo kakhulu okanye ukuqala ukutshaya. Yindlela phelisa uxinzelelo olwenziwe ngexesha elifanelekileyo.
Oonobangela abaphambili abaziwa, kodwa konke kunokuqala nge Inqanaba loxinzelelo, uxinzelelo okanye uxinzelelo. Isenzo sokuluma iinzipho senza umzuzu wokuphumla, apho umntu eneengxaki kulawulo lwempembelelo. Abafikisayo boyike ngakumbi ngokuphila la maxesha kwinqanaba labo lokukhula, zininzi izinto ezinokubangela ukucaphuka ngenxa yexabiso lezinto azikhuthazayo okanye iimeko angenakuzilawula.
Olunye uphononongo luye lwagqiba ukuba lo mkhwa unokwenziwa ngabantu abathi bafuna ukufikelela kwimfezeko. Jonga ukuba umntwana wakho uluma iinzipho zakhe kwaye ufuna ukudala imeko yokugqibelela, kuba ukwenza le nto kubenza bazole ukubacaphukisa, ukungoneliseki okanye kuba bayadikwa.
Ngokwenyani, bonke abantu kwanabantwana bayavuma ukuba ayikwazi kulawula lo mkhuba. Kwiimeko ezininzi, abazi ukuba baqala nini ukuyenza kwaye ukuhamba kwexesha banokuba nobunzima bokuyeka.
Iingcali ziyavuma ukuba ukwenza unyango kungaqala kakuhle, kodwa kuya kuba nzima kuba ingxaki iphinda ibuye. Amanye amayeza anokusebenza yile amantombazana anokupeyinta iinzipho zawo Kwaye ukuba inokuba ne-enamel esisigxina, ngale ndlela isikhonkwane siqina kwaye kunzima ngakumbi ukuluma.
Ezinye iindlela zezi "Inhibitors yeSerotonin", ezinye iziyobisi zengqondo ze lawula ixhala okanye ezo ziqulathe i-acetylcysteine. Abanye abazali, ukuba bayazigcina iimeko ezigabadeleyo, banokuya kwiingcali kulawulo lwe-anti-depressants.
Umngcipheko wokulunywa kwezikhonkwane
Kufuneka kuqatshelwe ukuba ukudala lo mkhwa kunokukhokelela kwiingxaki ezithile ezinzulu. Kumthetho amanxeba ayenziwa kulusu xa uluma, kubandakanya ii-hangnails ezidala amanxeba aphuma egazini, aba buhlungu kwaye athathe ixesha elide ukuphola.
La manxeba afanayo kunokudala usulelo kwaye ngamanye amaxesha kubenzima kwaye ngenxa yoko, loo minwe iphinda ibuyiselwe emlonyeni kwakhona, ivumela iibacteria ezininzi ukuba zingene emzimbeni wethu.
Ulutsha okanye abantwana abaluma iinzipho zabo babonakalisiwe kunokwenzeka ukuba ufumane iintsumpa zentsholongwane nakwimeko encinci ukubandezeleka ziimpethu, okoko batyile iiparasiti ezifunyenwe phantsi kweenzipho zabo xa bedlala ngomhlaba epakini.
Kwezinye iimeko ezinzulu ngakumbi iinzipho zize kumzimba womntu, de ifikelele kwilahleko epheleleyo yesikhonkwane kwaye ngenxa yoku deformation yeminwe ethile.
Ukuba umntwana wakho usathatha inxaxheba kukhathalelo abanokubanika lona abazali, unokuphucula ukubonakala kwezandla zabo, ubenze babenazo iinzipho zihlala zichetyiwe kakuhle, susa konke ii-hangnail ezinokwenzeka, zisusa ii-cuticles kwaye uhambisa izandla kakuhle. Ngokuzingisa okuncinci sinokuyiphelisa ingxaki, nangona kungelulanga. Nangona kunjalo siyakuhlala sinayo ukubonisana nososayikholoji wezingane okanye ugqirha wabantwana oko kunokusinceda.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Oomama Namhlanje » Unonophelo » ZeMpilo » Kutheni umntwana wam ofikisayo eluma iinzipho zakhe?
Ukwazi njani ukuba umntwana wam akanyamezelani nelactose?